Izinja ezi-22 ezihamba phambili zomndeni zezingane nabazali abamatasa - Izinhlobo
Ukwenza isinqumo sokuletha inja entsha empilweni yomndeni wakho kuyisinqumo esikhulu. Impilo yomndeni wakho izoshintsha; kuzoncika kakhulu ezingeni lempilo yakho nohlobo olukhetha ukuba yingxenye yalo.
Kukhona ezinye imibuzo ebalulekile okufanele uyicabangele lapho ufuna inja yomndeni :
Iyini indlela yokuphila yomndeni wakho? Ingabe usuvele umatasa unakekela izingane?
Uyini umbono wakho wosuku olukhulu? Ukuhamba ngezinyawo ehlathini, ukuba nabangane nxazonke noma ukugoqa incwadi?
Anjani amahora akho okusebenza? Ingabe usebenza kude?
Mkhulu kangakanani umndeni wakho? Ingabe izingane zakho zithola izinyawo zazo futhi zingqongqoze kalula?
Iqiniso ukuthi, yonke le mibuzo izokusiza uthathe isinqumo okuzalanayo izokufanela wena nomndeni wakho kangcono. Lokhu kusho ukuthi uzozivumelanisa kahle futhi uzokwazi ukuhlangabezana nezidingo zakhe.
Ukufuna uhlobo “oluhamba phambili” kungazwakala kukhungathekisa, ikakhulukazi kubanikazi bokuqala, kodwa siqoqe izinja zethu eziphezulu ezingama-22 ezilungele umndeni, ikakhulukazi abanikazi besikhathi sokuqala abangenaso isikhathi esiningi sokuphumula.
22. IBrussels Griffon
20. IBassett Hound
19. IBlue Tick Beagle
8. IGreyhound yaseNtaliyane
4. IBichon Poodle
3. IGolden Retriever
2. ILabrador Retriever
Yikuphi Okuhamba phambili?
Eyaziwa ngezinhliziyo zabo ezinkulu nemvelo yokudlala, iBrussels Griffon iyi-canine encane ezothatha ingxenye enkulu yenhliziyo yakho!
Banesibindi futhi bayasebenza, futhi kuzohambisana nemindeni ematasa kepha futhi zingaphezu kokuchitha isikhathi ujabulise ethangeni lakho.
Ukubukeka kwazo kungaba yintandokazi ezinganeni, futhi isimo sazo esinamahloni nobubi sizenza zihambisane kakhulu nentsha yokuqeqeshwa ngobuqili.
Umxube weChihuahua x Pug uyinja yomndeni enhle futhi enokuzethemba!
Ngokuvamile ziyabekezelela abantu abaningi kodwa ungacasulwa ngezingane ezincane kakhulu abangasiqondi isikhala sabo. Ngaleso sizathu, bangahle bafaneleke emakhaya anezingane ezineminyaka engaphezu kwemihlanu.
I-Chihuahua enamandla kuzo ngokuqinisekile izogcina imindeni ijabule. Kepha, lapho konke sekushiwo futhi kwenziwa, empeleni bangaba ngamavila kakhulu futhi bangahle bathande kakhulu kusofa nezingane ngemuva kokuhamba kwabo kwansuku zonke!
Lolu hlobo lwe-back-back luyisengezo esihle kunoma imuphi umndeni.
Bazobekezelela izingane ezincane nezingalawuleki , kepha bakhululeke ngokulinganayo kusofa nentsha enamagquma!
Ukukhululeka okukhulu, akukho lutho oluphazamisa lolu hlobo, banesimo esizinzile kakhulu.
Uyakuthanda ukuhamba kwakhe kwansuku zonke, kepha ujabule kakhulu ngokugcina ikhala lakhe phansi futhi ahlole yonke intshi kunokugijima amamayela ngaphambili. Inkinga kuphela uma ethatha iphunga, hlala ufundisa izingane ukuthi zimhambele!
19. I-Blue Tick Beagle
Amanye amaBeagle odume ngekhanda , noma kunjalo, uma begcinwa bematasa - akuyona into umndeni ongeke ukwazi ukuyiphatha.
NjengoBassett Hounds, amaBeagles ayathanda ukuba namakhala awo phansi futhi azolandela iphunga nomaphi lapho liholela khona. Ngalesi sizathu, ucela izingane ukuthi zimgcine kulayini omude lapho uphumela ekuhambeni.
AmaBeagles amnene futhi ayazijabulisa, bayathanda ukuba nabangane bazo zonke izinhlobo nobukhulu (kufaka phakathi izingane ezincane)!
Bahlakaniphile futhi bayasebenza, balungele leyo mindeni emincane futhi ematasa ethanda ukuhamba ngezinyawo nokuzidela.
Akumangalisi ukuthi uma bobabili iLabrador neBeagle benza uhlu lwethu, iBeagador izoya!
Ukuhlanganisa uhlobo olunomusa nokudlalayo lwamaLabradors neBeagador enobungani kuzokhiqiza ingxube ethanda ubumnandi nenomusa womoya!
Ukuthanda abantu nezinja, bafanela imindeni enekhaya elikhudlwana negceke eliphephile lokuhlekisa ! Ibhonasi nge lokhu kuxubana yiLabrador ethanda ukudla ingahle inqobe leyo streak enenkani eBeagle!
Ukugcina ubungani, ubumnandi nothando kokubili i-Golden Retriever neLabrador, lokhu kuhlangana kuyintandokazi nemindeni yaseMelika!
Bangaba nengubo emfushane yeLab camera, noma ijazi eliboshwe elide le-Golden Retriever - awukwazi ukuqiniseka ngemidlwane yesizukulwane sokuqala.
Noma yini ijazi, le nja iyazithanda izingane futhi ijabule kakhulu lapho idlala nazo .
Ngeshwa, zombili izinhlobo zingaphathwa i-hip ne-elbow dysplasia, ngakho-ke ukuthola abelusi abahloniphekile nokuphatha ukuzivocavoca nezingane lapho kuyimidlwane kubalulekile!
Ngobungane beLabrador nobuchopho bePoodle, le nja injalo isengezo esihle sanoma imuphi umndeni onezingane ezinkulu nezincane!
Ngenxa yokuhambisana kwazo okuhle kakhulu nemindeni nokubukeka okuhle, lezi zingxube zabaklami zithwala inani lentengo ebiza kakhulu eliphakathi kwe- $ 1,000 kuya ku- $ 3,000 USD.
Banobungane futhi bayazithanda izingane ezincane. Vele uqiniseke ukuthi uqala ukuqeqeshwa kwakhe nokuhlangana nabantu kusenesikhathi futhi uqhubeke impilo yakhe yonke!
ishumi nanhlanu. I-Goldendoodle
Uma iLabradoodle ilwenzile uhlu lwethu lwezinja zomndeni ezihamba phambili, neGoldendoodle nayo izokwenza kanjalo!
Lolu hlobo luyingxube yeGolden Retriever nePoodle.
Lapho zidalwa emigodini yegazi enempilo, maningi amathuba okuthi lezi zinja ukuba yi-hypoallergenic , kunjalo inkulu ezinganeni ezinezinto ezingezwani nokwaliwa.
Zingakhula zifike kumakhilogremu ayi-100, ngakho-ke lezi zinja zilungele kangcono izindlu ezinkulu.
Ngazo zombili izinhlobo zingama-canine asebenzayo, bayachuma emakhaya amatasatasa kakhulu futhi asebenzayo lapho benomuntu abadlala naye abangadlidliza naye engadini!
ICocker Spaniel x Ukuhlanganiswa kwePoodle kuyisengezo esithandwa kakhulu emindenini eminingi.
Ukuhlanganisa amandla eSpaniel, nobuhlakani bePoodle, le nja yomndeni ngokuqinisekile izogcina umndeni wakho ujabulile futhi ujatshuliswa. Uyachuma emakhaya aphithizelayo, kepha akaxabani ngezingane ezincane noma ezindala; uthanda izingane ezincane nezinkulu ngokufanayo!
Yena uthanda ukuba ngaphandle futhi njengoba bobabili abazali bezinja ezisebenzayo, akakhombisi kahle ukuthi ungenzi lutho isikhathi eside.
Olunye uhlobo lomndeni oluthathwa njenge-hypoallergenic; zingumdlalo omuhle wezingane ezincane ezinezinto ezingezwani nomzimba.
Inqwaba yokuhleleka, le nja ukwengeza okuhle emakhaya emindeni amancane.
Ukugcinwa okuphansi kakhulu, bangakhula emakhaya athule.
Banobungane, bayadlala futhi banothando abathandanga lutho ngaphandle kokugoqana kusofa nezingane!
Zingaba ntekenteke lapho imidlwane , ngakho-ke mhlawumbe awafanelekile emakhaya anezingane ezincane ezingaphatha ngephutha umdlwane. Umngane ofanele uma intsha ichitha isikhathi esincane ekhaya futhi izizwa ithule ngaphandle kwabo!
Uma ungathanda ukuba ne-pooch encane ezulazulayo ekhaya lakho lomndeni, khona-ke iChorkie iyimbangi eqinile ekhula ize ibe ngu-6-9 ”ubude.
Baziwa ngokukhonkotha ngakho-ke abalungile uma uhlala efulethini!
Uqinisekile futhi unenkani, uyaphuma futhi unomdlandla - uthando lwakhe ngempilo luyathathelana. Ziyisondlo esiphansi futhi zizojabula ngezinyawo ezimbili zemizuzu engama-20 ngosuku. Ngemuva kokuhamba, le nja yomndeni izogobhoza kusofa oseduze kwakho - umngane omuhle uma usebenza ekhaya lapho izingane zisesikoleni!
Babekezelela izingane ezindadlana kahle kakhulu, kepha ingacasulwa yizingane ezingasiqondi isikhala sazo .
Umxube we Wheaten Terrier x Poodle uvame ukubonwa ngokubheka njengebhere le-teddy . Ngosayizi omaphakathi, banengubo ethambile, egobile izingane eziningi eziyithandayo!
Ukuhlakanipha nokuzijwayeza kahle lokhu kubenza babe lula ukuqeqeshelwa imindeni yokuqala kanye nemvelo yabo egxile kubantu kubenza bazivumelanise kahle nemindeni eminingi.
Banobungane obumangalisayo futhi bathanda abantu nezinja zabo bonke ubujamo nobukhulu, vele uqinisekise ukuthi ubhekana nokuhlangana kwabo nabantu ngokushesha okukhulu!
Uma ufuna uhlobo oluncane, iShih Poo ingahle ilungele umndeni wakho.
Njengoba ziyinhlanganisela yePoodle, ziyi-hypoallergenic futhi zihlakaniphe kakhulu. Lokhu kusho ukuthi mancane amathuba okuthi babangele ukusabela futhi kunjalo ubumnene kakhulu nezingane (kusiza uma unezingane ezizwelayo).
IShih Poo iyadlala, inothando futhi inomoya omuhle.
Ngempela abakwazi ukungena enkingeni enkulu kumnikazi wokuqala futhi bathanda ubumnandi futhi banamandla, balungele umndeni omatasa kakhulu!
Njengoba benenja yethambo uShih Tzu egazini labo, zilungele amakhaya amancane nokugoqana kusofa nezingane.
Inja enobungane nebukekayo ingumphumela wokukhwelana a IHavanese enePoodle . Futhi, ngenxa yokuqeqeshwa okuhle kakhulu kumzali wePoodle, le nja ivumelana kahle nezindlela zokuphila zomndeni eziningi.
Mncane ngosayizi okusho ukuthi angakhula kahle emakhaya amancane, kepha angakuthokozela ukuthi kube negceke eliphephile lokuhlola nokuhogela!
Unomdlandla futhi uyadlala, usadinga ukuhamba kwakhe kwansuku zonke, kepha isimo sakhe sobumnene sisho ukuthi kunjalo Kulula ukuthola izingane zibandakanyeke esimisweni sakhe sokuzivocavoca nokuziqeqesha .
Zinothando futhi ziyadlala, lezi zilwanyane ezincane ziphelele uma isikhala siyinkinga!
Ngempela izinja ezingamavila ngendlela eyisimanga , ngemuva kokuba sebenodwi lwabo lwemizuzu engama-20 bezungeza ipaki!
Ngoba zinobungane obukhulu, futhi zinomoya omnene, zinjalo izengezo ezinhle emindenini enezingane zayo yonke iminyaka .
Ama-Greyhounds ase-Italy aqondiswe ngumnikazi futhi athanda ukujabulisa, ahlakaniphe kakhulu futhi athanda ukuqeqeshwa yizingane!
Ngenxa yejazi labo elifushane, aphansi ngezidingo zokuzilungisa, okwenza kube kuhle emindenini ematasa. Futhi azidli kangako ngenxa yobuncane bazo!
Inja yomndeni eyiqiniso, nje ayikhombisi kahle ukushiywa yodwa.
Imile ingadluli ku-13 ”ukuphakama, i-Cavalier King Charles Spaniel x Bichon mix iba yintandokazi eqinile emindenini eminingi yaseMelika.
Njengoba bobabili abazali bezijabulisa futhi benobumnene, babekezelela izingane zabo bonke ubudala .
Ukuthandeka nokukhalipha, kulula kakhulu ukuqeqesha imindeni ematasa engazange ibe nezinja ngaphambili.
Baziwa ngokubekezela nokuthamba, bazoxolela okuningi kusuka ezinganeni ezisencane.
Ngubani ongafuni inja yomndeni ebukeka njengebhere?
Umxube weCorgi x Poodle ngu ilunga lomndeni elithandekayo, elisebenzayo futhi elinothando.
Encane ngosayizi, zinhle ngezingane ezincane noma amakhaya anqunyelwe esikhaleni. O-sweet-natured, abanalo ithambo elibi emzimbeni wabo futhi benza abangane abakhulu bezingane ezincane.
Okukhanyayo nokuphumayo, akufanele ube nezinkinga zokubhekana nemiyalo ebalulekile yokuqeqesha nalo mfana!
Ngenkathi enamandla, uyajabula kakhulu uma esethole ukuhamba kwakhe kwansuku zonke.
I- Ukuhlanganiswa kwe-Pug x Beagle mancane amathuba okuthi ahlupheke ngezinkinga eziningi zezempilo zomzali wakhe we-Pug njengoba imvamisa ethatha isifonyo eside kumzali wabo webhova.
Zombili izinhlobo zinenkani, ngakho-ke umndeni wakho uzodinga ukuqonda ukuthi yini eziyazisa kakhulu (ukudla, amathoyizi noma ukuncoma) ... imvamisa kuba uhlobo lokudla.
Bahlakaniphile futhi banelukuluku, awusoze waba khona umzuzu ofiphele nale nja yomndeni nezingane!
Zincane ngosayizi, kepha hhayi ngohlamvu, zilungele amafulethi amancane futhi zibekezelela izingane zazo zonke izinhlobo nobukhulu.
Isine. I-Bichon Poodle
Ukuhlanganiswa okuthandekayo kweBichon nePoodle kwakha i-teddy-bear efana nohlobo lomndeni, ethandekayo, edlalayo futhi enothando.
Babekezelela abantu nezilwane ezifuywayo zabo bonke ubujamo nobukhulu lapho kuhlanganiswa kahle.
Ngenxa yobuhlakani bawo, kulula ukuwaqeqesha, kepha angaba phezulu kuzidingo zokuzilungisa njengawo wonke ama-doodle (uhambo olujwayelekile oluya esalon luzobaluleka).
Usezingeni lesithathu lokuthandwa e-US, lolu hlobo olunobungane noludlalayo luthandwa yizigidi zemindeni.
Basebenza kakhulu, ngakho-ke yenza inja ephelele emindenini abathanda ngaphandle futhi bamatasa.
Uyakwazi ukuhamba ngezinyawo, abhukude futhi agijime (lapho esekhule ngokugcwele), ngakho-ke angakwazi ukuza nakho konke nomndeni wakho!
IGolden Retrievers ithanda wonke umuntu, ngakho-ke inkinga enkulu ozoba nayo ukumhudulela kude nabantu nezingane ohambweni lwakho lwansuku zonke!
Bangaba nokuxokozela eminyakeni yabo yobuncane, ngakho-ke khumbula uma unezingane ezincane kakhulu okulula ukuthi ungqongqoze kuzo. Uma lokho sekungaphandle kwesistimu yakhe, izingane zakho ngeke ziphinde zithole i-pooch eqotho ngokwengeziwe!
Awumangazi ukuthi iLabrador yenze lolu hlu angithi?
Benza phezulu ukubhaliswa kweKennel Club unyaka nonyaka ngenxa yemvelo yabo enobungane nokudlalayo. Lezi zilwane ezifuywayo zomndeni zizimisele ukujabulisa, futhi zenzelwe ukudla kakhulu. Lezo zimfanelo ezimbili zibenza babe iphupho lokuziqeqesha!
Uzobathola ku- ophuzi, ushokoledi nomnyama namajazi aminyene!
Zichitha kancane impela, ngakho azizifanele izingane ezinokungezwani nezinto ezithile komzimba, kodwa uma lokho kungeyona inkinga, iLabrador ifanelana nemindeni eminingi.
Uzobona umehluko ngokubukeka kuwo wonke ama-Labradors asebenzayo nawolayini, ngakho-ke lapho uthola umfuyi, chaza ukuthi ufuna ulayini wombukiso.
Ngemvelo ebabazekayo yeCavalier King Charles Spaniel kanye nobuhlakani bePoodle, iCavapoo iyinja enobungani evumelana nemindeni eminingi.
Banamandla lapho kudingeka, afanele imindeni esebenzayo futhi esencane, kodwa futhi abathandi lutho olungcono kunokugoqana kusofa babukele ifilimu!
Ngempela bangakwenza konke.
Okubi nokho ukuthi iCavalier King Charles Spaniel iya ngokuya iba nempilo njengohlobo, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthola umfuyi ohlonishwayo wenja yomndeni wakho.
Uhlu lwethu lwezinja zomndeni ezingama-22 ezinhle kakhulu, ezilungele abanikazi besikhathi sokuqala abanokuphila komndeni okumatasa.
Hlala phansi wenze uhlu lwezimpendulo zemibuzo yethu esethulweni bese wenza uhlu olufushane lwezinhlobo kulolu hlu.
Iyiphi inja engangena kahle? Cabanga ukuthi unesikhathi esingakanani onaso sokuzivocavoca nokuhlangabezana nezidingo zakhe, ikakhulukazi lezo zokuqeqesha nezenhlalo.
Ngabe uthathe enye yalezi zinja? Sazise ngezansi.
ukuhlanganiswa kwe-rottweiler ne-blue nose pitbull
ushokoledi lab umgodi mix imidlwane
inja encane ibopha indlela yokugqoka
inja enkulu ibiza imbiza yesilisa